KETSANA(17W) ပြီးလျှင် (18W) လာဦးမည်လော? | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
KETSANA(17W) ပြီးလျှင် (18W) လာဦးမည်လော?
September 27, 2009 — mmweather
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 17W မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KETSANA အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိကာ လတ်တလောအချိန်တွင် ဟိုင်နန်ကျွန်းတောင်ဘက်မှ ဖြတ်သန်းလျှက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းကို လာမည့် ၄၈ နာရီအတွင်း ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည့်အနေအထားတွင်ရှိနေပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှေ့ဘက် မိုင် ၂၅ဝဝ ခန့်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 18W စတင်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 18W သည် အနောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားနေပြီး အဆင့်-၁ CAT-1 သို့ စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့တွင်ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း TSR မှ ခန့်မှန်းချက်အရ သိရှိရပါသည်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 18W နှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KETSANA တို့အား mmweather မှ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်လေ့လာလျှက်ရှိပါသည်။
Posted in Education, Weather News. Tags: tropical-depression, weather. LeaveaComment »
« ဗီယက်နမ်နှင့်လာအိုတို့သို့ KETSANA သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်
KETSANA(17W) ၃၆ နာရီအတွင်း ဗီယက်နမ်သို့ဝင်မည် »